कानुनी संस्था के हो? | अर्थव्यवस्था वित्त
अवश्य पनि कानुनी निकायको नाम नागरिकहरूको राम्रो अंशले व्यापक रूपमा सुन्ने गर्दछन्, यद्यपि उनीहरूलाई यसको वास्तविक अर्थ के हो भनेर तिनीहरूलाई थाहा छ। यो भाषिक घटनालाई सुधार गर्न, यो भन्नु आवश्यक छ कि यसले मूल रूपमा सक्षम काल्पनिक व्यक्तिलाई जनाउँछ व्यायाम अधिकार र गतिविधिहरू पूरा गर्न दायित्वहरू प्राप्त गर्दछ जुन पूर्ण कानुनी जिम्मेवारीको कारण गर्दछ। यसको एउटा विशेष प्रासंगिकता छ जसको विस्तृत अनुबंधहरू विकास गर्न यसमा ज्यादै विशेष आकृति आवश्यक छ र त्यो उदाहरणको श्रृंखलासँग अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ।
एउटा पक्ष जुन शुरुदेखि नै जोड दिनुपर्दछ कि त्यो प्राकृतिक व्यक्तिको फिगरसँग मेल खाँदैन। किनभने वास्तवमा, केहि केसहरूमा यो समान हुनेछ, तर अरूहरूमा यो त्यस्तो हुँदैन। अन्य कारणहरूको बीचमा किनकि व्यक्तिको अवधारणा धेरै फराकिलो छ कार्यहरू गर्न अनुमति दिई दुबैमा कम्पनीहरू संग मानिसहरू जस्तै। यसको चौडाई, त्यसकारण, यसको एक सामान्य डिनोमिनेटरहरू मध्ये एक हो र यसको अर्थ जुन यो शब्द निर्देशित छ जुन तपाईंले आफ्नो जीवनमा धेरै पटक सुन्नुभयो।
अर्कोतर्फ, तपाईंलाई यो जान्नु आवश्यक छ कि निश्चित सामाजिक वा व्यावसायिक समूहलाई दिइने भूमिका बढी हो कि यसले प्रक्रियामा भाग लिन सक्दछ। कानूनी प्रणाली। यसका सबै सदस्यहरूले अनुसरण गरेका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने मौलिक उद्देश्यको साथ। अचम्म मान्नु पर्दैन, यो व्यक्तिसंगको प्रासंगिक शब्दलाई भ्रमित गर्ने जोखिम छ जब वास्तविकतामा यो यसरी हुँदैन, यो संक्षिप्त परिचयमा वर्णन गरिएझैं
1 कानूनी व्यक्ति: मतभेद
2 अन्य आंकडाको साथ लिंकहरू
3 यस कानूनी फारमका फाइदाहरू
4 कानूनी व्यक्तिको बेफाइदाहरू
5 शासकीय निकायहरू
कानूनी व्यक्ति: मतभेद
तपाईले अन्य विचारहरू माथि थाहा पाउनु पर्छ त्यहाँ यस विषयका वर्गहरूमा अन्य धेरै सामान्य सर्तहरूको सन्दर्भमा केही धेरै ठोस भिन्नताहरू छन्, जस्तै प्राकृतिक व्यक्ति। खैर, पछिल्लो व्यक्तिगत लागि जिम्मेवार हुनेछ ऋण र दायित्वहरु त्यो कम्पनीले केहि बिन्दु वा अर्कोमा लिन सक्छ। जबकि यसको विपरित, कानूनी व्यक्तिमा यो घटना कम्पनीको सम्पत्तिमा सीमित छ। यसको अर्को भिन्नता यो हो कि प्राकृतिक व्यक्ति एकल व्यक्तिले बनेको हुन्छ।
यो महत्त्वपूर्ण फिगरलाई चिन्नको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण चिन्ह तपाईंको आफ्नै मान्यतामा आधारित छ। त्यो हो, यो लागू गर्दछ ताकि एक व्यक्ति वा संस्था (कुनै पनि प्रकारको) सँग एकै समय अधिकार र दायित्वहरू छन्। कानूनी प्रक्रियाका लागि यो धेरै महत्वपूर्ण छ जुन उनीहरूले गुमाउन सक्छन्। वा पनि को लागी एक कम्पनी को स्टार्ट-अप वा व्यावसायिक परियोजना। अचम्मको कुरा होइन, यसले प्रशासकीय प्रक्रियाको विभिन्न क्षेत्रमा भविष्य कार्यहरू निर्धारित गर्दछ। यस बिन्दुमा तिनीहरू कुनै पनि प्रकार र सर्तको अनुदान प्रदान गर्न वा सहायता दिन मान्य हुन्छन्।
अन्य आंकडाको साथ लिंकहरू
यस लेखमा हामीलाई चिन्ता गर्ने शव्दको सही अर्थमा पुग्न अन्य तुलनाहरू हाइलाइट गर्नु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। यस अर्थमा, कानुनी फिगर के हो भनेर पत्ता लगाउन सब भन्दा सान्दर्भिक कुञ्जीहरू मध्ये एकले तिनीहरू जस्तोसुकै साधारण भए पनि सजिलैसँग परिणत गर्दछ sसार्वजनिक सीमित कम्पनीहरू, सीमित कम्पनीहरू, indistinctly। दुबै केसमा कानुनी व्यक्तिहरू उपस्थित छन्। यद्यपि केहि अवसरहरूमा तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यो संख्या कम्पनीको नाम अन्तर्गत लुकेको छ। यदि कसैले उनीहरूले दावी गरेको दायित्वबाट जोगिनका लागि र यो कानुनी प्रक्रिया हो भने पनि यो नैतिक दृष्टिकोणबाट सिफारिस गरिएको अभ्यास होईन भनेर स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ। अन्य विचारहरूको पछाडि जुन अन्य अधिक विशिष्ट विश्लेषणहरूको विषय हुनेछ।
के तपाइँ केहि उदाहरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ जसले कानूनी व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ? ठिकै छ, तपाईं अनौंठो आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुनेछ किनकि ती सबैलाई राम्ररी परिचित हुन्छन्, जस्तै इंडिटेक्स, एल कोर्टे ईन्ग्लिस वा लेरोय मर्लिन। अर्को शब्दमा, तिनीहरू इक्विटी बजारमा सूचीबद्ध भएका कम्पनीहरूका मालिकहरू हुन सक्छन्। किनभने वास्तवमा, धेरै जसो अवस्थामा यसले कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ जुन व्यायामaव्यावसायिक गतिविधि। जस्तो कि हामीले यस लेखमा व्याख्या गरेका छौं। त्यसोभए यस तरीकाले तपाईंसँग पहिले नै थोरै स्पष्ट छ के यो शब्दको वास्तविक प्रभाव के हो जुन योको सही समझको लागि अलि जटिल हुन सक्छ।
यस कानूनी फारमका फाइदाहरू
जे भए पनि कानुनी व्यक्तिले योगदानहरूको श्रृंखला समावेश गर्दछ यदि तपाईं यो संख्यामा एकीकृत हुनुहुन्छ भने। तपाईंले तिनीहरू मध्ये केही थाहा पाइसकेका हुन सक्नुहुनेछ, तर अरूले तपाईंलाई चकित पार्न सक्छन् र तीबाट तपाईंलाई फाइदा पनि लिन सक्दछन्। ती मध्ये एउटा हो जुन हामी तपाईंलाई तल बाहिर निकाल्दछौं:
तपाईसँग एउटा स्थितिमा छ उच्च राजधानी किनकि यो अन्य पार्टनरहरू द्वारा योगदान गर्न सकिन्छ। यो व्यवसाय, कम्पनीहरू वा कुनै पनि व्यावसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहित गर्न धेरै प्रभावकारी रणनीति हो।
सबै केसहरूमा तपाईसँग राम्रो हुन्छ क्रेडिट लाइनहरूमा पहुँच कि बैंकिंग निकाय व्यापारीकरण। अन्य प्रकारका ग्राहकहरूको प्राथमिकतामा, व्यक्तिहरू सहित। तर एक थप मूल्यको साथ जस्तै तिनीहरूलाई उत्तम करार शर्तहरूको साथ औपचारिकता दिइनेछ कि यसरी तपाईं लेखा परिचालनमा केही यूरो बचत गर्नुहुन्छ।
उनको अर्को सान्दर्भिक योगदानहरू यस तथ्यमा निहित छ कि कानूनी व्यक्ति बिना सार्वजनिक टेन्डरहरू पहुँच गर्न सक्ने स्थितिमा छ प्रमुख प्रतिबन्धहरू। अन्य आंकडाको सम्बन्धमा निश्चित प्राथमिकताका साथ र यसले तपाईंलाई यी दृष्टिकोणहरूको सन्दर्भमा तपाईंको उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
अघिल्लो सेक्सनको सम्बन्धमा त्यहाँ अर्को व्युत्पन्नता छ जुन तपाईंको व्यक्तिगत रुचिहरूको रक्षा गर्न र एक पेशेवर दृष्टिकोणबाट पनि धेरै रोचक हुन सक्छ। यो एक श्रृंखला समावेश बाट व्युत्पन्न तथ्य हो सामाजिक लाभहरू र सुरक्षित र ती अन्यथा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। आधिकारिक निकायबाट शुरू गरिएको अनुदानको एक विशेष रेखामा ग्रहणयोग्य पनि हुन सक्छ।
र अन्तमा, यो कुनै पनि समयमा बिर्सिन मिल्दैन कि कानूनी संस्थाहरूसँग छ सीमित दायित्व। अभ्यासमा यसको मतलब भनेको उनीहरूले दायित्व वा debtsणका लागि कम्पनीले गर्न सक्ने दायित्वको लागि उनीहरूले उल्लेखनीय रूपमा प्रतिबन्ध गर्छन्। यो तथ्यलाई कि उनीहरूको जीवनको कुनै बिन्दुमा यो तथ्य उनीहरूलाई धेरै फाइदा पुग्न सक्छ।
कानूनी व्यक्तिको बेफाइदाहरू
तर सबै यस विशेष आंकडाका साथ फाइदाहरू होइनन्, तर त्यहाँ केही असुविधाहरू छन् जसलाई तपाईंले ध्यानमा राख्नु पर्छ यदि तपाईं यी कुनै पनि अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ भने। यस अर्थमा, यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि तपाईं निश्चित दृष्टिकोणहरूको साथ अनौंठो आश्चर्य पाउनुहुन्छ। हामी तपाईंलाई तल देखाउन गइरहेका छौं जस्तो।
यसमा कुनै श doubt्का छैन कि यसको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि भनेको यसलाई एक आवश्यक छ अधिक लगानी यसको गठनको लागि। त्यो हो, यसको मतलब यो एक ठूलो वित्तीय प्रयास हो जुन तपाईंले कानुनी संस्था बनाउनु पर्छ यदि यो तपाईंको इच्छा हो भने।
अर्कोतर्फ, प्रशासनिक प्रयास यो धेरै ठूलो हुनेछ। अचम्मको कुरा होइन, तपाईंसँग लेखा कागजातहरूको ठूलो संख्या प्रस्तुत गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। यो त्यस्तो व्यक्तिले भन्न सक्दछन् जो नोकरशाही प्रक्रिया सामान्य भन्दा बढि देखि यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।
El समाजको नियन्त्रण यो बाँकी भन्दा बढी फैलाउने छ किनकि प्रशासन धेरै व्यक्तिमा खस्न सक्छ। तिनीहरू साझेदारका रूपमा लिइन्छन् र त्यहाँ निर्णय लिने वा कुनै आर्थिक वा कानूनी व्यवस्थापन गर्न अझ बहस हुनेछ। यो भिन्नता हो जसले धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो कानुनी संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने चाहनामा फिर्ता सेट गर्दछ।
निस्सन्देह, उसको अर्को नकारात्मक योगदान अन्य यो तथ्यमा आधारित छ कि यो संख्याले ठूलो कठिनाई प्रस्तुत गर्दछ बन्द वा बेच्न। यो त्यस्तो प्रक्रिया जस्तो सरल छैन जुन अन्य प्रकारका तथ्या .्कहरू मार्फत हुन सक्छ।
यदि तपाइँ वास्तवमै चाहानुहुन्छ विस्तार गर्न वा इक्विटी कम निस्सन्देह, अधिक समस्याहरू तपाईलाई पर्खिरहेका छन् किनकि प्रतिबन्ध बढी छ। यस बिन्दुमा कि तपाइँ आफैंलाई लेखा दृश्यबाट घटनाहरूमा डुबेको देख्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, तपाईले दिमागमा राख्नु पर्छ कि कानूनी व्यक्ति एक कम्पनी स्थापना गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो संभव परिदृश्य छैन। यसको विपरित, त्यहाँ अरू ढाँचाहरू छन् जुन तपाईंको व्यक्तिगत रुचिहरूको रक्षाको लागि अधिक उपयोगी हुनेछ। तपाईले उनीहरूको बारेमा मात्र सोध्नु पर्छ यदि तपाईले संविधान सूत्र अपनाउन चाहानुहुन्छ भने।
अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो हो जुन यसको नियमनसँग सम्बन्धित छ। यस अर्थमा यो प्राकृतिक व्यक्तिको अस्तित्व हो जुन तपाईंसँग भएको मालको गन्तव्य निर्धारण गर्दछ। तपाईं यो भुल्न सक्नुहुन्न कि निकायहरू कानूनद्वारा र कानुनी व्यक्तिहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको कानून द्वारा नियमित छन्। जसमध्ये निम्नलिखित तिनीहरूको विशेष सान्दर्भिकताको कारण खडा हुन्छ:
El प्रशासक यो सबैमा सबैभन्दा सामान्य हो।
एक अधिक जटिल आंकडा किनभने यो तथाकथित को विशिष्ट मामला मा छ एकता प्रशासकहरु.
El निर्देशकहरूको बोर्ड यो सर्तहरू मध्ये एक हो जससँग तपाईं अधिक परिचित हुनुहुनेछ किनभने यो कानुनी व्यक्तिहरूले विशेष फ्रिक्वेन्सीको साथ प्रयोग गरिन्छ।
र अन्तिम रिसोर्टको रूपमा, अन्य प्रशासक निकायहरू जस्तै शेयरधारक वा साझेदारहरूको बोर्ड, केहि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण बीच र एकै समयमा सामान्य। त्यहाँ कुनै श is्का छैन कि ती एकै हुन् जुन तपाईंलाई अहिल्यै सबैभन्दा ठूलो आवाज दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कानुनी संस्था के हो?